Siilaanyo: Waxba kama qabo in Muuse Biixi ila tartamo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hargeysa – Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Somaliland, Axmed Maqxamed Maxamuud “Siilaanyo” ayaa ka hadlay khilaafka cirka isku sharreeray ee u dhaxeeya siyaasiyiinta Xisbiga talada haya ee KULMIYE.
Siilaanyo oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay inuu ka xunyahay khilaafka xisbiga dhxdiisa ah, wuxuuna xusay ku fiicneyd in khilaafka ka dhex jira Xisbiga KULMIYE hoos loo xalliyo.
“Waxaa maalmahan soo baxayey khilaaf xisbiga KULMIYE dhexdiisa ah, waan ka xumahay manaan filayn wakhtigan, oo waxaan u haystay in aan kala reebay intii is haysay, oo weliba guddi turxaan-bixineed u saaray, taa soo suurta gelisay in shirwaynihii loo soo gebagebeeyo si qurux badan, waxaana halkaa lagu doortay shirgudoonkii maamulayey shirka, hogaankii xisbiga iyadoo layslaqaatay in golihii dhexe iyo fulintii lagu soo ururiyo shirgudoonka shirka, waa lagu soo ururiyey waanay soo saareen” ayuu yiri Axmed Siilaanyo.
“Hadiiba uu soo baxo is-fahmi-waa, waxay ahayd in si hoose loo dhameeyo, hogaanka xisbigu wada fadhiisto, Kaadirka xisbiga loo yeedho, Xildhibaanada la talogeliyo, hadiii taasi dhamayn waayaan xisbigu sharci buu leeyahay dalkuna sharci buu leeyahay. Buuq iyo qaylo toona looma baahnayn” ayuu sidoo kale yiri madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Siilaanyo.
Madaxweyne Siilaanyo ayaa diiday inuu jiray ballan u dhaxeeyey isaga iyo Muuse Biixi, kaasoo ahaa in doorashada soo socota uu xilka madaxweynaha u tartamo Muuse Biixi oo ah gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE.
“Arrinta musharaxnimada madaxweynaha ee xisbiga KULMIYE ma jirto balan noo dhaxaysay aniga iyo Muuse Biixi habayaraatee, waxaa jirtay oo golaha dhexe soo saaray in aan gudoomiyaha ku wareejiyo marka aan ku guulaysto tartanka doorashada madaxweynaha, waxaanan ku wareejiyey bil-gudaheed” sidaa waxaa warbaahinta u sheegay madaxweynaha maamulka Somaliland, Axmed Siilaanyo.
Isagoo ka hadlay doorashada soo socota ayuu madaxweynaha maamulka Somaliland wuxuu xusay inuu xitaa la tartamo Muuse Biixi oo ay isku xisbi yihiin, inkastoo uu tilmaamay inuusan horay u arag madaxweyne uu xilka kula tartamayo siyaasi ku xisbi ah.
“Waxaa xisbigu ii doortay musharaxa madaxweynaha waanan ku guulaystay sharciguna wuxuu i siiyey labo jeer, waan sharaxanahay diyaar baan u ahay cid kasta oo illa tartanta, waxay ahaan jirtay dabeecada nidaamka dimuqraadiyadu in la tartamo balse ma dhacdo xisbi xaakin guulaystay oo xisbigiisu la tartamaa, aniguse waxba kamaqabo” ayuu yiri Axmed Siilaanyo.
Axmed Siilaanyo ayaa meesha ka saraay in uu diiday ergadii Odayaasha ahayd ee Golaha Guurtida Somaliland oo ka shaqaynayasay dhexdhexaadinta iyo isu soo dhawaynta khilaafka Xisbiga KULMIYE, waxaana uu carabka ku dhuftay in aanay jirin diidmo uu kala horyimi Odayaasha.
Dhanka kale, wuxuu Siilaanyo ka hadlay qaraxyadii habeenadii lasoo dhaafay ka dhacay Hargeysa, wuxuuna caddeeyey inuusan u dulqaadan doonin dadka abuuraya amaan-xumada, isagoo xusay in mas’uuliyadda amaanku isag dusha ka saran tahay.
Madaxweynaha Somaliland ayaa qiray in amaan darrada dhawaanahan ka jirtay Hargeysa ay ka dambeeyaan dadka deegaanka ah oo aan looga imaan gobollo kale.
“Waxaynu feejigo u lahayn, oo iska illaalinaynay cadaw meel fog inooga yimaada, waxaase ayaan daro ah, in kuwii aan ammaanka u diray iyo kuwii damaca lahaa ee dalkan inay xukumaan doonayey, laga soo sheego waxyaalo ammaanka ku lidi ah, iyo inay isku dayaan in ay qarankan khalkhal geliyaan“ayuu yiri Siilaanyo.
“Waxaan leeyahay qarankan anigaa masuuliyada koowaad iga saarantahay, umma dulqaadanayo mana aqbalayo cidna gorgortan kala gelimaayo ammaanka iyo xasiloonida dalka, waxaan ku qaban doonaa gacan adag, waxaan la tiigsan doonaa sharciga” ayuu yiri Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo).
Khilaafka u dhaxeeya xisbiga haya talada maamulka Somaliland ee KULMIYE ayaa cirka isku shareeray, waxaana qaraxyo ka dhacay Hargeysa loo aaneeyey iney ahaayeen kuwa la xiriiray khilaafka xisbigaas.
Xildhibaano: Caalamku ha joojiyo faragelinta uu ku hayo dowladda Soomaaliya